Nyi Mu Yar: ယူအက်စ်ဘီ ပေါ်က ဝင်းဒိုးစ် အိပ်စ်ပီ အပိုင်း (၃)
ယူအက်စ်ဘီ ပေါ်က ဝင်းဒိုးစ် အိပ်စ်ပီ အပိုင်း (၃)
ယူအက်စ်ဘီ ပေါ်က ဝင်းဒိုးစ် အိပ်စ်ပီ အပိုင်း (၂)
ယူအက်စ်ဘီ ပေါ်က ဝင်းဒိုးစ် အိပ်စ်ပီ အပိုင်း (၁)
at Friday, July 03, 2009 Labels: MM , Technical Posted by nyimuyar
စက်ကို ဖောမက်ရိုက်ပြီး ဝင်းဒိုး ပြန်တင်ရတယ် ဆိုတာ ကွန်ပျူတာ သုံးစွဲနေသူတဦး အတွက် အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ အိုအက်စ် စီဒီကို စီဒီ ဒရိုက်ထဲထည့်၊ စီဒီကနေ boot လုပ်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အတိုင်း ဆက်လုပ်သွားရုံပါပဲ။
ခုနောက်ပိုင်း ပေါ်လာတဲ့ EEE ပီစီ တို့လက်တလော ထွက်ထားတဲ့ Acer Timeline and Aspire One တို ့၊ နောက် HP Elite book ၂၅၃၀ပီ၊ HP mini တို ့လို ပါးပါးလှပ်လှပ် notebook ၊ net book တွေမှာ စီဒီ။ ဒီဗီဒီ drive တွေ တွဲပါမလာတော့ပါဘူး။
တခါတရံ စီဒီ။ ဒီဗီဒီ ဒရိုက် ပျက်တဲ့အခါမျိုး လန်းစ်မကောင်းတဲ့ အခါမျိုးမှာ စီဒီ ကနေ ဘု လုပ်ရမယ်ဆို အတော် အကြပ်ရိုက်ရပါတယ်။ တခါတလေ အားလုံး ကောင်းပါရဲ့နဲ့ စီဒီက ဖတ်မရတဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း ဖော်မက်ရိုက် အိုအက်စ် အင်စတော လုပ်ရတာ အဆင်မပြေပါဘူး။
အဲ့လို အခက်အခဲတွေနဲ့ အထက်က Optical Drive မပါတဲ့ စက်တွေ အိုအက်စ် Install လုပ်ဖို့ရာ အဆင်ပြေချောမွေ ့စေဖို့ ယူအက်စ်ဘီကနေ ဝင်းဒိုးစ် အိပ်စ်ပီ ကို ဖောမက်ချ အိုအက်စ် အသစ် တင်ဖို့နည်းလမ်းတွေ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။
ဘာ့ပါပီအီး ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်း အဲသလို နည်းလမ်းတွေ အတော်ကို ကျယ်ပြန့် များပြားလာပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ အင်တာနက်မှာ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ ရှိတဲ့အထဲက ညီမူရာ ကြိုက်တဲ့ နည်းကိုပဲ ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယူအက်စ်ဘီ drive/stick ကို ဝင်းဒိုးအိပ်စ်ပီ Windows XP bootable installer လုပ်ဖို ့ရာ အတွက်
၁ ဂစ် ပမာဏ အနည်းဆုံး သိုမှီးနိုင်တဲ့ ယူအက်စ်ဘီ တခု လိုပါမယ်။
ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ဝင်းဒိုးအိပ်စ်ပီ bootable CD ကောင်းကောင်း လိုပါမယ်။
ယူအက်စ်ဘီ ကို bootable လုပ်ပေးမယ့်ဆောဝဲလ် လိုပါမယ်။
flash drive prep.rar ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီး လွယ်ကူတဲ့ တနေရာမှာ ဇစ်ဖြေထားရပါမယ်။
အဲ့ဒီ ဖိုင်ထဲမှာ ဖိုဒါ ၂ခု ရှိပြီး ပထမဆုံး usb_prep8 ဖိုဒါထဲကို ဝင်ပြီး usb_prep8.cmd ဖိုင်ကို run ရပါမယ်။
ဒီလိုမျိုး ကွန်းမန်းလိုင်း ဝင်းဒိုး တခုထက်လာမှာ ဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဖြစ်ဖြစ် ဒီ ဝင်းဒိုးကို မပိတ်မိစေဖို ့ပါပဲ။ နောက်ဆုံးကျမှ ပိတ်ရမှာ။
press any key to continue ဆိုတော့ ကြိုက်တဲ့ ကီးတခု သာနှိပ်ပေးလိုက်ပါ PeToUSB ဆိုတဲ့ ဝင်းဒိုး တက်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီ ဝင်းဒိုးက ယူအက်စ်ဘီကို boot နိုင်အောင် ဖောမက် ရိုက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ Start ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး ဖောမက်ရိုက်တာကို စောင့်လိုက်ပါ၊ ဖောမက်ရိုက်လို့ပြီးစီး အောင်မြင်ကြောင်း လာပြပါလိမ့်မယ်။ သထိထားရမှာက ဒီ PeToUSB ကိုလည်း သွားမပိတ်လိုက်ပါနဲ့ဦး။
အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ကွန်မန်းလိုင်းကနေပြီး ဖိုင်ဒေါင်းလုပ်ချ ဇစ်ဖြေထားတဲ့ ဖိုဒါထဲရောက်အောင် သွားရပါမယ်။ အဲ့ဒီ ထဲကမှ bootsect ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲ ထပ်ဝင်ပါ ပြီးရင် ဟော့ဒီ ကွန်မန်းကို ရိုက်ပေးရပါမယ်။
ကိုယ့် ယူအက်ဘီ drive letter ကတော့ ကိုယ့်စက်မှာပေါ်တဲ့ အတိုင်းရိုက်ရမှာပါ။ စာရေးသူ စက်မှာကတော့ G: လို ့ပေါ်လို့G: လို ့ရိုက်လိုက်တာပါ။
Successfully updated FAT filesystem bootcode ဆိုတာ ပေါ်လာတာနဲ့ အဲ့ဒီ နောက်ဖွင့်ထားတဲ့ ကွန်မန်းဝင်းဒိုး ကို ပိတ်လို ့ရပါပြီ။
တဆက်တည်း PeToUSB ဝင်းဒိုး ကို ပိတ်ပေးရပါမယ်။ ပိတ်လိုက်တာနဲ့ ပထမဆုံး ဖွင့်ထားတဲ့ ကွန်းမန်းလိုင်းမှာ အောက်ကလိုမျိုး ၈ မျိုးပါတဲ့ စာသားတွေ ပြောင်းသွားမှာပါ။
အဲဒီမှာ နံပါတ် ၁ ကနေ စရမှာပါ။ ၁ ကို ရိုက်လိုက်တာနဲ့ ခဏအကြာမှာ Browse For Folder popup ဝင်းဒိုးလေး တက်လာမှာပါ။ ပြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့ winXP Boot CD ထည့်ထားတဲ့ စီဒီ drive(ဒါမှမဟုတ် Virtual CD Drive) ကို ရွေး ပေးရပါမယ်။ စာရေးသူ ရဲ့ စက်မှာကတော့ စီဒီ ထဲ့ထားတာ F ဒရိုက်ဖြစ်လို့F ကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။ (Virtual CD Drive ပါ)
နံပါတ် ၂ က သူပေးတဲ့ အတိုင်းထားရင်ရပါတယ်။
ပြီးရင် နံပါတ် ၃ အဆင့် အဖြစ် ၃ ဂဏန်း ကို ရိုက်ပေးပြီး ကိုယ့် ယူအက်စ်ဘီ drive letter ရွေးရပါမယ်။ စာရေးသူ ရဲ့ ယူအက်စ်ဘီ drive letter က G ဖြစ်တာမို့G လို့ရိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အားလုံး အဆင်သင့် ဖြစ်ရင် လုပ်ဆောင်ချက်တွေ စဖို့နံပါတ် ၄ ဂဏန်းကို ရိုက်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ နောက် တက်လာမယ့် မေးခွန်းတွေ အတွက် popup ဝင်းဒိုးတွေ တက်လာရင် ကြည့်ပြီး နှိပ်ရုံပဲ ကျန်ပါတယ်။
ပထမဆုံး မေးခွန်း အဖြစ် Temp Drive ကို ဖောမက်ချမလားလို ့မေးပါလိမ့်မယ် YES ဖြေလိုက်ရုံပါပဲ။
စီဒီ ဒရိုက်ထဲက ဖိုင်တွေကို Temp drive ထဲ ကူးချသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီတကြိမ်ပဲ စီဒီကို သုံးတာပါ။ ပြီးရင် ဆက်လုပ်ဖို့ကီးတခုခုကို နှိပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ နှိပ်ပေးလိုက်ပါဦး။
ခဏအကြာမှာ Temp drive ထဲက ဖိုင်တွေကို ယူအက်စ်ဘီ ထဲ ကူးမလားလို ့မေးပါလိမ့်ဦးမယ်။
YES ပဲ ဖြေရုံပဲပေါ့။ ဖိုင်တွေ ကူးတာ နဲနဲကြာပါတယ်။ ကိုယ့်စက်ရဲ့ အမြန်နှုန်းနဲ့ လည်း ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အားလုံး ကူးပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ယူအက်စ်ဘီ drive ကို bootable drive အဖြစ် လုပ်မလား လို ့မေးပါလိမ့်မယ်။ YES ဖြေရုံပါပဲ။
နောက်ဆုံး မေးခွန်းအဖြစ် Temp Drive ကို ပြန်ဖြုတ်ချမလားလို့မေးပါလိမ့်ဦးမယ်။ ကိုယ်သုံးဖို ့မလို ရင် ဖြုတ်ခိုင်းတာ ကောင်းပါတယ်။ YES ပဲပေါ့။
နောက်ဆုံးတကာ့ နောက်ဆုံး အဖြစ် အားလုံး ပြီးစီးပါပြီ ကြိုက်ရာကီး နှိပ်နိုင်ပြီး ပိတ်ပါလို့ပြောပါလိမ့်မယ်။
ကြိုက်ရာ ကီးတခုခု ကို နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဖြင့် ယူအက်စ်ဘီ drive ကို Windows XP Bootable Installer USB အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခြင်းအမှု အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးသွားပါပြီ။
ဖောမက် ရိုက်ချင်တဲ့ စက်မှာ ယူအက်စ်ဘီ drive ကိုတပ်၊ Bios setting မှာ ယူအက်စ်ဘီ ကနေ boot မယ်လို့ရွေးပေးရပါမယ်။
ယူအက်စ်ဘီ ကနေ boot လိုက်တဲ့အခါ boot loader screen မှာ ပထမအကြိမ် အဖြစ် TXT Mode ကို ရွေးပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် စီဒီကနေ boot တဲ့ ပုံမှန် အတိုင်း ဆက်လုပ်သွားရုံပါပဲ။
အခုဆိုရင် ၁ ဂစ် ယူအက်စ်ဘီ တချောင်းမှ ၈ ဒေါ်လာ ၉ ဒေါ်လာ လောက်ပဲ ရှိတဲ့အချိိန်မှာ ယူအက်စ်ဘီ တချောင်းလောက်ကို တခါထဲ winXP Bootable လုပ်ပြီး နေရာတကာ သယ်သွားလို ့ရနေပါပြီ။ အဲ့ဒီထဲက ကျန်တဲ့ နေရာမှာလည်း အခြားဒေတာတွေ ထည့်ထားလို ့ရပါသေးတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပြန်ဖော်မက် ရိုက်ပြီး ပုံမှန် ယူအက်စ်ဘီ ဒရိုက်အဖြစ်လည်း ပြန်သုံးနိုင်သေးတာမို့စမ်းချင်တဲ့ သူတွေ စမ်းနိုင်အောင်၊ လိုအပ်သူတွေ အသုံးချနိုင်အောင်၊ မသိသေးသူတွေ သိပြီး အကျိုးရှိအောင် ကြိုးစားရေးရင်း နဲ့ ယူအက်စ်ဘီ ပေါ်က ဝင်းဒိုး အိပ်စ်ပီ ကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။
Credit goes to : eeeguide , liliputing
Special Thanks to all of my Teachers and Ex-Colleagues
(Ko MO, Ko TL, Ko PM, Ko ZTM, Ko AWN, Ko ZMH, Ko AKS, Ko YN and SNDP)
ရှုပ်တော့ ရှုပ်တယ်။ နောင်ကြုံမှ လာသုံးတော့မယ်ဗျာ။
5 July 2009 at 02:34
အူဘန်းကျူး သုံးနည်းလေးပါ ရေးပေးပါလား။ ဟီးဟီး။
6 July 2009 at 01:30
I will, if I'veachance.
how to download this rar ?(flash drive prep.rar)